सांसद ज्युहरु ‘कर्म गर्नुस्, गीतमाथि राजनीति नगर्नुस् – प्रमोद खरेल — Imandarmedia.com
काठमाडौँ । गायक प्रमोद खरेलले सांसदहरुलाई काम गर्न सुझाव दिँदै गीतमाथि राजनीति नगर्न अनुरोध गरेका छन् । गायक खरेलले आफ्नो फेसबुक एकाउन्टमा लेखेका छन् ‘पशुपति शर्मालाई २५ हजार दिने प्रतिपक्षी सांसद र प्रतिउत्तरमा एक महिनाको तलब दिने सत्ताधारी सांसदलाई अनुरोध, त्यो पैसा आफ्नो क्षेत्र वा विकासमा थप्नुस्, जनताका लागि काम गर्नुस्, ताकि फेरि फेरि यस्ता गीत बन्न नपरोस्, कर्म गर्नुस् गीतमाथि राजनीति नगर्नुस् ।
लोकगायक पशुपति शर्माको व्यंग्यात्मक गीत‘लुट्न सके लुट’को मुद्दा स‌ंसदमा पनि पुगेको छ । देशमा बढेको भ्रष्टाचारबारेमा कटाक्ष गर्दै गाएको यो गीत युट्युबबाट हटाइएको विषयमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षी सांसदहरुबीच सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा घोचपेच भएको हो ।
नेकपा र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु यो गीतलाई लिएर संसदमा घोचपेचसहितको बहसमा उत्रिएका हुन् । सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद झपटबहादुर रावल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद अमरेश कुमार सिंहबीच यो गीतलाई लिएर घोचपेचसहितको विवाद भएको हो ।
सत्तारुढ दल नेकपाको युवा संगठनसहितको दबाबमा शर्माले युट्युबबाट गीत हटाएको भन्दै कांग्रेसका सांसद सिंहले संसदमा कुरा उठाएपछि बहस भएको हो । सिंहले बैठकको शून्य समयमा आफ्ना कुरा राख्दै गायक शर्मालाई २५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार दिने पनि बताए ।
सिंहले कटाक्षको शैलीमा सत्तारुढ दल र सरकारमाथि व्यंग्य गरेपछि बहस अघि बढेको थियो । त्यसपछि सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद रावलले सिंहलाई पुरस्कार दिने बताए । रावलले पुरस्कार घोषणा गर्ने सांसदले पशुपति शर्माको उक्त गीत संसद्‍मै गाएमा एक महिनाको तलब दिने घोषणा पनि गरे ।
सांसद रावलले शर्माले अन्जानमा यस्तो गीत गाएको आफुहरुले बुझेको अवस्थामा प्रतिपक्षी सांसदले पुरस्कार नै घोषणा गरेपछि यो गीत गाउनुको रहस्य खुलेको पनि उनले बताए । ‘पशुपति शर्माको गीतलाई सरकारले प्रतिबन्ध गरेको छैन’, उनले भने, ‘भगवान् पशुपतिले जोगाउन नसकेको प्रतिपक्षलाई गायक पशुपतिले रक्षा गरुन् ।’
सांसद रावलले कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको पालामा गायक शर्माले नेपाललाई स्वर्गको संज्ञा दिँदै ‘मलाई अमेरिका यही, मलाई जापान पनि यही’बोलको गीत गाएको पनि स्मरण गराए ।
रावलले तिनै गायक शर्माले दुईतिहाइ बहुमतसहितको सरकारलाई अहिले भने यमराज, कुकुर र राक्षस भनेको बताउँदै आपत्ति जनाएका हुन् । सांसद रावलले शर्माको यो गीतले देश लुट्न प्रेरित गर्ने भन्दै कडा शब्दामा आपत्ति जनाए ।
गायक पशुपति शर्माको गीत र त्यहाँ समावेश भएको शव्दको विषयलाई लिएर सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रै पक्ष र विपक्ष खडा भएका छन् ।खासगरी राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले प्रयोग गर्ने सेनाको हेलिकोप्टर र यमराजको शासन भन्ने शव्दमा आपत्ति जनाउँदै उनलाई गीत हटाउनका लागि दबाब दिइएको थियो ।
उक्त प्रकरण चर्चामा आउनासाथ खुमलटारले भने शर्माको पक्षमा बोलेको छ । नेकपाका अध्यक्ष मध्येका एक जना पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिलेको अवस्थाको चित्रण गरिएका कारण गीतमाथि कुनै पनि प्रकारको टिप्पणी गर्न नहुने बताएका थिए ।
उता, खुमलटारबाटै सकारात्मक टिप्पणी गर्दै प्रचण्ड पक्षधर नेता कार्यकर्ताले उक्त गीतको बचाऊ गरेका छन् । त्यस मध्येका एक जना अखिल क्रान्तिकारीका पूर्व उपाध्यक्ष मदन चुडाल भन्छन्,‘कलाकारको सृजनाले के बोलेको छ भन्ने भावलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन, हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक अवस्थामा छौं भन्ने विषय सबैले बुझ्न आवश्यक छ ।’
यता, शर्माको गीतप्रति ओली समर्थित तथा युवा संघका नेता र कार्यकर्ताले दबाबसहित हटाउन चेतावनी दिएका थिए भने कतिपयले सामाजिक सञ्जालमा सरकारको बचाउ पनि गरेका थिए ।
सामाजिक सञ्जालमा ओलनिकट मिना श्रेष्ठले शर्माको गीतको सफ्ट आलोचना गरेकी छन् । उनले गायक मन पर्ने भए पनि यो गीतमा भएका शव्दचयन गलत भएको बताएकी छन् ।
खुमलटार स्रोतले भन्यो,‘हामीले राजाविरुद्ध गीत गायौं, क्रान्तिको एउटा प्रयोग पनि हो । तर, अहिले यस्तो अवस्थामा गीतमाथि घोषित या अघोषित प्रतिबन्ध गर्न मिल्दैन ।’
शर्माको गीतको पक्षमा प्रमूख प्रतिपक्षी भने खुलेरै समर्थमा लागेको छ । नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले लेखेका छन्,‘अब गीत पनि गाउन नपाइने कस्तो लोकतन्त्र ? यो लोकतन्त्र हो त ?’
यसैबीच ‘लुट्न सके लुट् कान्छा’ बोलको गीतका शब्दका कारण विवादमा परेका गायक पशुपति शर्माले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ‘यमराज’ नभनेको स्पस्ट पारेका छन् ।
‘जनता जान्न चाहन्छ’ नामक टेलिभिजन कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै गायक शर्माले प्रधानमन्त्री ओलीलाई यमराज नभनेको बताएका हुन् । ‘मैले गीतमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई यमराज भनेको होइन । हजुबाको पालादेखिको शासनलाई भनेको हो’, उनले भनेका छन् ।
गीतमा रहेका शब्दलाई लिएर युवा संघ नेपालका नेताहरूले फोन गरेर गीतमा रहेका शब्द र तस्बिरहरूमा आपत्ति जनाएको उनले बताए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई ढेड अर्बको हेलिकप्टर चढेको विषयमा पनि युवा संघ नेपालले आपत्ति जनाएको बताए ।
गायक शर्माले आफूले कुनै राजनीतिक दललाई फाइदा हुने गरेर गीत नबनाएको बताए । ‘भ्रष्टाचार र बिकृतिविरुद्ध मेरो गीत हो’, उनले भने, ‘कसैलाई पनि चोट पुर्याउने आशय मेरो होइन ।’उनले केही शब्द परिमार्जन गर्ने बताएका छन् । ‘यमराज’, ‘राष्ट्रपति’का कुराहरू परिमार्जन हुने शर्माले बताएका छन् ।
राष्ट्रिय लोकदोहोरी प्रतिष्ठानले हाल विवादित बनिरहेको गीत ‘लुट्न सके लुट..’ लाई फेरि जस्ताको तस्तै यूट्यूबमा राख्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकपछि जारी प्रेस विज्ञप्तिमा शर्माको गीत जस्ताको तस्तै सुन्न पाउनु दर्शक, स्रोताको अधिकार भएको भन्दै पुन अपलोड गर्न सर्जक पशुपति शर्मालाई आग्रह गरिएको छ । प्रतिष्ठानको बैठकले संगीत विकास बोर्ड अथवा संगीत सेन्सर बोर्ड गठन गर्न सरकारलाई गरेको आग्रह पुन:स्मरण गराएको छ ।
यस्तै बैठकमा उपस्थित गायक पशुपति शर्माले यूट्यूबबाट गीत हटाउनुको कारणबारे जानकारी गराएका थिए । उनको भनाइ उद्वृत गर्दै प्रतिष्ठानका अध्यक्ष बद्री पंगेनीले भने, ‘मलाई एक दुईवटा फोन आयो । राष्ट्रपतिको विषयमा किन यस्तो लेखेको भन्ने कुराहरु आए । म एक्लै पनि थिएँ । त्यसैले आत्तिएर हटाएँ ।’
उनले गीतमा आफूले व्यक्ति विशेषको भन्दा प्रवृत्तिको विरोध गर्न खोजेको स्पष्टिकरण दिएका थिए । ‘म कुनै पार्टीसित आवद्ध छैन र कुनै पार्टीको विरोधि पनि होइन,’ पशुपतिले भने, ‘कसैप्रति पूर्वाग्रही भएर लेखेको थिइनँ । विवाद आउला भन्ने अनुमान पनि भएन ।’
अध्यक्ष पंगेनीले पशुपतिको गीत फेरि यूट्यूबमा जस्ताको तस्तै अपलोड गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका छन् भने शर्माले गीत फेरि राख्ने विषयमा सोचेर निर्णय लिने बताएका छन् । पंगेनीले जनमानसमा चलिरहने कुराहरुलाई लिएर पशुपतिले गीत बनाएको भन्दै यसमा आपत्ति जनाउने विषय नभएको बताए ।